Kamerada daahsoon, Kamarada hawada, Kamarada aan duuliyaha lahayn ee warshadaha - Roobabka
Sawirka buuxa ee Drone/UAV kamarad khariidad ah
Kaamiro qaabaysan oo buuxa oo leh kala firdhisanaan hoose oo dheeraad ah iyo qallooc hoose. Qaabka lagu aasaasay xogta ay soo aruurisay DG4Pros ayaa leh saameyn aad u sareysa iyo saxsanaan aad u sareysa.
Qiimo sare oo waxtar leh, kamarad oblique pixel sare ah
DG4M/DG6M waa kharash wax ku ool ah,pixel-sare, kaamerad bakhti ah oo buuxa oo ay samaysay RainpooTech oo ku salaysan taxanaha sare ee Pro. Waxay ku habboon tahay rotor-wing/garabka go'an ee UAS ee suuqa waxayna si weyn u wanaajin kartaa waxtarka helitaanka xogta.
Kaameerada sawir qaade ee lens-ka-dhamaadka sare ah
Waxay leedahay wadar ahaan 100MP pixels waxayna ku qalabaysan tahay qaab dhexdhexaad ah oo sawirka, waxay heli kartaa tayada sawirida iyo dareenka sare. Isku-xidhka MS ee lagu dhex dhisay oo cimrigiisu ka badan yahay 500,000 jeer.
kamarad khariidad sax ah oo xirfad leh iyo heer sare ah
M6pros waa badeeco ujeedo badan leh, oo ku qalabaysan madax xasiloon oo triaxial ah oo loo isticmaali karo labadaba sawir-qaadista sawir-qaadaha iyo sawir-qaadista fog-dhow si loo abuuro qaabab 3D tayo sare leh oo la safeeyey.
Shirkadda High-Tech,Rainpoo waxay u hoggaansamaan dhaqanka geek waxayna u hoggaansamaan mabda'a hal-abuurnimo joogto ah. Waxaan rajeyneynaa in dhammaan alaabooyinka ay si fiican ugu adeegi doonaan macaamiisheena oo ay u abuuraan qiimo iyaga.
RIY kaamirooyinka qarsoon RIE kamaradaha muraayadaha hal-lens Agabka
DG4M waa qaab buuxa oo kharash-ool ah, pixel obliq sare...
DG6M waa kharash-ku-ool ah,-pixel-sare, obli-frame-buuxa...
Qaabaynta 3D, Sahanka, GIS, Magaalada Smart, Dhismaha, Macdanta, iwm
210MP / qaab-buuxa / 960g / waqtiga ugu yar ee soo-gaadhista
D2/D3——Drotor-ka rotor-ka badan ee caadiga ah
120MP/APS-C/850g/inta ugu yar ee wakhtiga gaadhista ≤1s/mu...
Waa kamarad sawir-qaade-dhaqaale ah oo orthometric ah, ...
Kamarada khariidaynta hawada ee Rainpoo M10 ayaa miisaankeedu fudud yahay ...
Faa'iidooyinka M6 waa badeecad ujeedo badan leh, oo ku qalabaysan tr...
61MP/jir-buuxa/330g/muddada ugu yar ee gaadhista ≤0...
Nidaamyada Sawir-qaadista ee Range Xir oo tayo wanaagsan -...
Noocyada kamaradaha: DG4pros
Noocyada kamaradaha: Dhammaan kamaradaha leh M600pro sida Mou ...
Noocyada kamaradaha ee taageeraya: Dhammaan Noocyada
Waa maxay sababta Roobabka
Waxaa naga go'an inaan noqono bixiyaha xalka aduunka hogaaminaya ee xog ururinta macluumaadka juqraafiga iyo codsiyada kadib.
Soo saaraha kamarada ugu weyn ee Shiinaha Waxaa la aasaasay 2015, roobka roobka ayaa diiradda lagu saaray ...
Lens indhaha oo madax-banaan horumariyay
Hal kamarad, shan lenses. Isku dhafkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawiro ka soo ururiso shan persp...
Haddi ay tahay UAV-ga rotor-ka badan, drone-ka garabka go'an, ama VTOL, kamaradahayadu waxay noqon karaan kuwo...
Roobabku waxa ay ururiyeen tiro badan oo tignoolajiyada xudunta u ah dhinacyada indhaha, navigation inertial, sawir-qaadista, iyo habaynta xogta goobta.
dib u dhiska ka dib dhulgariir
Kooxda dayactirka roobabka ayaa ka qaybqaatay wax badan oo baaxad leh...
Kala hadal Iibka >
Nidaamka iibka ka dib ee qumman waa dammaanadda wareegga shaqada alaabta.
Diirada saar Xudduudaha iyo Raadinta Wanaajinta
Sheekada guusha ee sawir-qaadista
Kiis guul ah oo sawir qaadis ah --Isticmaal moodka 3D si aad u samayso sahan cadastral meelaha dhaadheer 1...
Iyada oo la adeegsanayo hordhaca Sidee dhererka diiradda u saameeya natiijooyinka qaabaynta 3D, waxaad yeelan kartaa...
Agoosto - 03 2021
D2+ DG3PROS| Mashruuca Wadajirka ah ee Iskaashatada Qaybaha Badan ee Guryaha
Agoosto - 25 2020
Agoosto - 24 2020
Sida GSD iyo noocyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee siday u saameeyaan saxnaanta moodeelka 3D